यसकारण हरीयो खुर्सानी खान आवश्यक हुन्छ, जसले दिन्छ आश्चर्यजनक फाइदाहरु। - Malayakhabar
होम पेज स्वास्थ्य यसकारण हरीयो खुर्सानी खान आवश्यक हुन्छ, जसले दिन्छ आश्चर्यजनक फाइदाहरु।
यसकारण हरीयो खुर्सानी खान आवश्यक हुन्छ, जसले दिन्छ आश्चर्यजनक फाइदाहरु।
पिरो खान मन पराउने धेरै हुन्छन् । तर, अत्यधिक पिरो त्यसमा पनि मसलेदार खानेकुराले छाती र पेटमा समस्या गर्छ । यद्यपि, हरियो खुर्सानी खाने हो भने पिरो स्वादसँगै अन्य लाभसमेत उठाउन सकिन्छ । हरियो खुर्सानीले पेट र छातीमा असर गर्दैन । यसमा भिटामिन ए, बी–६, सी, आइरन, पोटासियम, कार्बोहाइड्रेट र अन्य धेरै पोषक पदार्थ पाइन्छन् ।
हरियो खुर्सानी स्वास्थ्यसँगै सौन्दर्यका लागि पनि फाइदाजनक छ । दैनिक हरियो खुर्सानी खाएमा छालामा चमक आउनुका साथै रोगप्रतिरोधात्मक क्षमता अभिवृद्धि गर्छ । प्रशस्त मात्रामा भिटामिन सी र ई पाइने भएकाले रगत सफा गर्नुका साथै अनुहारमा आउने पिम्पल्सबाट समेत राहत मिल्छ ।
अब यसका फाइदाबारे चर्चा गरौँ :
१. हरियो खुसार्नी क्यालोरी रहित हुन्छ ।
२. हरियो खुसार्नीले डाइविटिजलाई पनि फइदा गर्छ । हरियो खुर्सानी खानाले तपाईको शरिरको ब्लड शुगर लेबल सन्तुलित हुने गर्छ ।
३. पाचन शक्ति बढाउँछ । खुर्सानीमा फाइबर हुन्छ, कब्जीयतबाट बचाउँछ। यसले खाना सजिलै तरिकाले पचाइदिन्छ र यसले पाचन सम्बन्धी बिमारीहरुलाई राहत मिल्छ ।
४. हरियो खुसार्नीमा एन्टी बैक्टीरियल गुण पाईन्छ जसले गर्दा छाला सम्बन्धि रोग लाग्नबाट बचाउँछ ।
५. क्यान्सर बाट बच्न हरियो खुर्सानीले सहयो गर्छ ।हरियो खुर्सानीमा एन्टीअक्सीडेन्ट हुन्छ जसले शरिरको रोग प्रतिरोधक क्षमता बढाउँछ । पुरुषहरुलाई हरियो खुर्सानीले पोस्ट्रेट कैंसर को खतराबाट बचाउने गर्छ ।
६. प्रतिरक्षामा सुधार ल्याउँर्न सहयोग गर्छ । हरियो खुर्सानीमा भिटामिन सी भरपूर मात्रामा हुन्छ जसले प्राकृतिक प्रतिरषमा सुधार गर्छ । यसले तपाईलाई विमारी हुनबाट बचाउँछ अर्थात् रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउँछ ।
७. हरियो खुर्सानी सेवन गर्नाले छालाको लागी फाइदाजनक । हरियो खुर्सानीमा भिटामिन इ पनि पाइन्छ जसले छालाको लागि आवश्यक प्राकृतिक तेल बनाउने गर्छ । यसले छाला मुलायक र राम्रो हुन जान्छ ।
८. हरियो खुर्सानीको सेवनले शरीरमा आइरनको कमी हुनबाट बचाउनुका साथै दिमाग तेजिलो बनाउँछ
तर यसको सेवन भने ठिक्क मात्रामा गर्नु पर्छ फाइदा गर्छ भन्दैमा बढी भने खानु हुँदैन ।
अघिल्लो लेख पारसले भने मलाई गौतमबुद्ध क्रिकेट रंगशालामा खेलेर सन्न्यास लिने इच्छा छ।
पछिल्लो लेख संसारमै सबैभन्दा लामो समयसम्म प्रधानमन्त्री बनेका शेख खालिफाको निधन।
यस्ता लक्षण देखिए मृगौलामा समस्या हुनसक्छ, कसरी बच्ने?
किन हुन्छ हृदयघात ‘हर्ट अट्याक’?
प्रधानमन्त्री ओलीले लगाए कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप।